२५ वैशाखपछि के हुन्छ लकडाउन ? – Yug Aahwan Daily
२५ वैशाखपछि के हुन्छ लकडाउन ?
युग संवाददाता । १८ बैशाख २०७७, बिहीबार १९:१३ मा प्रकाशित
880 पटक हेरिएको
काठमाडौं, १८ बैशाख ।
देशव्यापी लकडाउन, सामाजिक दूरी, सरसफाइजस्ता उपायबाट नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रसारलाई रोक्ने प्रयास गरिएको छ । प्रशासनको अनुमतिविना मानिसको हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ । हवाई उडानसँगै नेपाल–भारत सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । उद्योगरकलकारखाना, कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । ११ चैतदेखि गरिएको लकडाउन अनिश्चित बन्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ । कतिपय मानिसले भोकसँग जुध्नुपरेको छ ।
पछिल्लो पटक २५ वैशाखसम्मका लागि गरिएको लकडाउन पुनः थपिएला कि खुल्ला त ? धेरैमा यस्तो जिज्ञासा छ । ७७ वटै जिल्लालाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उच्च जोखिम, जोखिम र सामान्य गरी ३ अवस्थामा विभाजन गरेको सरकारले कार्यदल बनाएरै लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्नेसम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाली सेनालगायतका निकायका अधिकारी संलग्न छन् । उनीहरू लकडाउन खुलाउने वा यसको स्वरुप परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयको खाका बनाउन लागिपरेका छन् ।
कार्यदलका सहभागी १ अधिकारी भन्छन, ‘२५ वैशाखसम्म कोरोना संक्रमणको अवस्था के हुन्छ, कति संक्रमित थपिन्छन, यी सबै कुरा हेरेर आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार कतिपय जिल्लामा परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमित बढ्न सक्ने सम्भावना रहेकाले त्यस्ता जिल्लामा लकडाउन खोलिने छैन । जस्तो कि, सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएको उदयपुर र छेउछाउका जिल्ला, पूर्वको झापा, सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरसहित तराईका अधिकांश जिल्लामा लकडाउन खुल्ने सम्भावना न्यून छ । ती जिल्लामा लकडाउन केही खुकुलो पारिए पनि २५ वैशाखमै खुल्छ भन्न नसकिने उनले बताए ।
संक्रमित नदेखिएका जिल्लामा लकडाउन खुलाएर प्रभावित जिल्लामा निरन्तरता दिने तयारी हो ? भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, ‘कोरोना प्रसारको स्थिति के हुन्छ, यसैमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ । कार्यदलमा रहनुभएका सबै सदस्य लकडाउनलाई खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यद्यपि, कसरी, कुन मोडालिटी अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी नै छ ।’
‘२५ वैशाखपछि आवश्यकता, औचित्य र जोखिम विश्लेषण गरी क्षेत्रगत रणनीति अपनाउने गरी काम थालिएको छ’, उनले भने । कोरोना संक्रमित देखिएका बाहेकका जिल्लामा लकडाउन खोल्न तथा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी केही नियम बनाउन सकिने खालका प्रस्ताव पनि कार्यदलमा आएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोना संक्रमण नदेखिएका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा लकडाउन खोल्ने विषयमा भने कार्यदलका सबै एकमत छन् ।
कृषि, उद्योग, कलकारखानालगायत उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार निर्माणको काम भने पुनः सुरू गरिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एवम् उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव नारायण बिडारी भने लकडाउनबारे अहिले नै केही भन्न नसकिने बताउँछन् । यद्यपि, २५ वैशाखभित्रको स्थिति हेरेर आवश्यक निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘केही मोडालिटीमाथि गहन छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘के हुन्छ, पछि थाहा भइहाल्छ ।’ कार्यदलले केही दिनभित्रै मोडालिटी तयार गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिमा पेस गर्नेछ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।